Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A December 2010 (1)
Q and A December 2010 (1)
1. Menstruation Period လာတဲ့အချိန် အရမ်းနာကျင်ပြီး၊ အောင့်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်
2. လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ နာကျင်မှာလဲ ကြောက်ပါတယ်
3. HIV ရောဂါရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးဟာ ခလေးကို ခွဲမွေးတဲ့အခါ အန္တရာယ် ရှိပါသလား
4. ကိုယ်ဝန်ရှိရင်ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ပြတက်ပါသလဲရှင့်
5. I'm having menstruation problem.
December 04, 2010 5:40 PM
ကျွန်တော့် ချစ်သူက အပြင်ဆေးခန်း (အမျိုးသမီးဆရာဝန်) တွေဆီမှာပြချင်၊ ဆွေးနွေးချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ သွေးစစ်ရမှာတွေ၊ ဆေးစစ်ရမှာတွေ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာနဲ့ သူ့ကိုယ်စားမေးပေးတာပါ။ သူ့အသက်က (၂၆) နှစ်ပါ၊ အိမ်ထောင်မရှိ၊ အပျို။ ကျန်းမာရေး ကောင်းသူဖြစ်ပီး ဆေးရုံတတ်၊ ရောဂါကြီးကြီးမားမားဖြစ်ဖူးတဲ့ ရာဇဝင်မရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက အရမ်း အေးတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့တမြို့မှာ နေပါတယ်။ သူဖြစ်နေတဲ့ရောဂါက-
မိန်းမသားတို့သဘာဝ Menstruation Period လာတဲ့အချိန် အရမ်းနာကျင်ပြီး၊ အောင့်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဖြူတွေလည်းအရမ်းဆင်းတယ်၊ နောက် သူကနေတာထိုင်တာလည်း သန့်ရှင်းပါတယ်ဆရာ။ အဲလို အရမ်း ကိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူ သောက်တတ်တဲ့ဆေးက dofenal လို့ပြောပါတယ်။ နာတဲ့အချိန်တိုင်း တလုံးတလုံး သောက်လေ့ရှိတယ် ပြောပါတယ်။ သူက အစိုးရိမ်လွန်တတ်တတ်တော့ ဘာဖြစ်နိုင်သလည်းတွေးပြီး စိတ်ပူနေပါတယ်ဆရာ။
ဆရာအနေနဲ့ အချိန်ရမယ်ဆိုရင် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် နဲ့ သောက်ရမည့်ဆေးနည်းလေးများ ညွှန်ပြစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Blog Post အနေနဲ့ ရေးထားပြီးသားရှိတယ်ဆိုရင်လည်း Link လေးတချက်လောက် လမ်းညွှန်ပေးပါ ဆရာ။
ကျနော် ကရင်တိုင်းရင်းသား တစ်ယောက်ပါ။ အခုအသက် ၂၄ နှစ်ရှိပါပီး။ ကျနော့်ရဲ့ ယောက်ျားလိင်တံက အခုထိတိုင် တိုတိုလေးသာရှိပီး၊ ထိပ်အရေပြားရှည်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သာမာန်နေစဉ်မှာ ယောက်ျား တန်ဆာကို အောင်ဘက်ထိ လန်ချလို့ရပေမယ့်၊ သွားနေချိန်မှာတော့ ထိပ်ကနေလှန်ချလို့ မရဘဲ ထိပ်ပေါက် ကျဉ်းနေတယ်။ အဲဒါကို ဖြတ်သင့်ပါသလား။ ထိပ်အရေပြားဖြတ်လျှင် ဘယ်လိုနေရာဆေးခန်းမျိုးတွေမှာ သွားဖြတ်သင့်ပါသလဲ။ မဖြတ်ဘဲ ဒီအတိုင်းထားရင် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ နာကျင်မှာလဲ ကြောက်ပါတယ်။ ဖြတ်လိုက်လို့ ရေပြားထဲက အကြောတွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်မှာလား။ ဓါတ်ပုံရိုက်ပီး ပို့လိုက်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံမှာ ပန်းထိပ်အရေပြားကို ဆွဲလှန်တာပါမှ ခွဲဘို့သင့်-မသင့်ပြောနိုင်ပါမယ်။ ထိပ်ဖေားအရေပြား ရှည်နေတာ ရောဂါမဟုတ်၊ လုပ်စရာမလိုပါ။ သန့်ရှင်းရေးသာ ပိုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ လိင်တံတိုတာလဲ ရောဂါရယ်လို့ မဟုတ်ပါ။ သာမန်ခွဲစိတ်တာနဲ့တော့ မရပါ။ ခွဲဘို့လဲ မလိုတတ်ပါ။
တကယ်လို့ ပန်းထိပ်အရေပြားက ဆွဲလှန်လို့ ကွမ်းသီးခေါင်း အကုန်မပွင့်ရင်တော့ Phimosis ပန်းငုံတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ ခွဲရမယ်။ မခွဲဘဲ အိမ်ထောင်ပြုသူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေတောင် ရတာဘဲ။ ဆီးသွားတာက မျှဉ်မျှဉ်လေးသာ ထွက်ရင် မြန်မြန်ခွဲပါ။ ခွဲတာက Minor surgery သာမန်ခွဲစိတ်မှုသာဖြစ်တယ်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တိုင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ သာမန်ဆေးရုံ၊ တောဆေးရုံတွေမှာလဲ လုပ်ပေးတယ်။ အတွေ့အကြုံများတဲ့ ဆရာဝန်ကို အားကိုးဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
လိင်တံသေးတာ ကြီးချင်တဲ့အကြောင်း၊ ပန်းငုံတဲ့အကြောင်းတွေ ရေးထားပါတယ်။ ရှာမတွေ့ရင်တော့ ပြောပါ။
ဆရာရှုင့် တစ်ခုသိချင်လို့ထပ်မေးချင်ပါတယ်။ HIV ရောဂါရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးဟာ ခလေးကို ခွဲမွေးတဲ့အခါ အန္တရာယ် ရှိပါသလား။ အထူးသဖြင့် မေ့ဆေး၊ ထုံဆေးပေးရင် အန္တရာယ်ရှိပါသလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့် မစပယ်
အန္တရာယ် မရှိပါ။ ခွဲမွေးတာက မွေးလမ်းကနေ မွေးတာထက် ကောင်းပါတယ်။ မေ့ဆေး၊ ထုံဆေးလဲ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်ဘို့ HIV/AIDS စာတပုဒ် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆရာရှင့် ကိုယ်ဝန်ရှိရင်ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ပြတက်ပါသလဲရှင့် သမီးက အခုရာသီမလာတာ တပတ်ကျော်နေပါပြီ။ အမျိုးသားလည်း ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးလာရက်က အောက်တိုဘာ ၂၈ မှ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ထိဖြစ်ပါတယ်။ သမီးက အရင်ကတည်းကလည်း ရာသီမှန်လေ့မရှိပါဘူး။ သမီးတို့နေတဲ့အခါမှာလည်း အကာအကွယ်အမြဲသုံးပါတယ်။ ရာသီ မလာသေးတာကလွဲရင် တခြားဘာမှကို မဖြစ်ပါဘူး ဘယ်လိုမှလည်း မခံစားရပါဘူး။ အဲဒါက ကိုယ်ဝန် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
၁။ Pregnancy Tests ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ စမ်းသပ်ခြင်းကို ဖတ်ပါ၊ လုပ်ပါ။
၂။ Morning sickness ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ လက္ခဏာတွေရှိ-မရှိကြည့်ပါ။
၃။ ဘာမှမတေ့ ဘာမှမဖြစ်ရင် စောင့်ပါ။
Fri, Dec 3, 2010 at 9:53 PM,
Q: I'm having menstruation problem. My menstrual cycle is 30 days and it's having round about any day of 25 or 26 of each month & it takes3to4days amonth. However, it's totally missed in September and came out with brownish colour on 14th & 15 of October and it's too little compared with normal condition.
Starting from 16th of November, there was something likeaspotting pink bleeding everyday. Sometimes it can only be seen the blood when I'm wiping with tissue in toilet. From 25th November onwards, period is coming likeanormal but it doesn't stop until now. It's almost 20 days inclusive of spotting days, without spotting days is about 10 days.
My breast is very painful during the spotting days. Other than that I'm not getting any pain (lower back pain, breast pain) or no dizziness at all. Normally, I only got lower back pain within period days. This isafirst time I got breast pain. Could it be miscarriage or any other uterus problem? I don't want to go and see docotor as Gyne consultation fee is very expensive here but if it's really necassery i would go.
For your information: I'm trying to getababy almost6months and I'm married & 32 years old. I and my husband are of same age. I have planning to give birth before 34 or 35. I was married last4years and I don't take any pregnancy pills and i don't have any big issue of health problem before.
A: You should check Urine for pregnancy test. It can be done at home. If it is positive, it can be an abortion. If that so, you need treatment. But some people experience complete and do not need evacuation.
If urine test is negative, it can be an irregular cycle. Then you need other treatment. Please tell me the urine result. Meanwhile take iron and vitamin B and C supplement as well as balance diet.